Fifaninanana lahatsoratra am-blaogy momba ny Covid-19 sy ny fihibohana – Blaogin'i Voniary
Miala any indray ny fifaninanana lahatsoratra am-blaogy karakarain’ny vondrona Teny Gasy 2.0. Andiany faharoa ity. Lohahevitra hampiakatra ny aingam-panahin’ny maro mihitsy no nosafidiana : « Ny Covid-19 sy ny fihibohana: ireo fiovana nentiny teo amin’ny fiainanao ». Indro atolotra anao ny andinindininy mikasika izany.
Ny lohahevitra : Ny Covid-19 sy ny fihibohana
Tranga goavana teo amin’ny tantaran’ny zanakolombelona ny valanaretina Covid-19. Samy manana ny fomba niainany izany ny tsirairay ary mino aho fa samy niaina fiovana ihany koa. Mety ho ratsy ny vokatra nentiny teo amin’ny fiainanao fa mety ho tsara ihany koa. Ny Blaogin’i Voniary, izay mivoy ny fijery miabo moa dia resy lahatra hatrany hoe misy zava-tsoa azonao sintonina foana ao anatin’izay zava-mitranga rehetra.
Izany indrindra no nahatonga ny vondrona Teny Gasy 2.0 nisafidy io lohahevitra io mba samy hitantara, hamakafaka ary hisintona lesona ny tsirairay.
Momba ny fifaninanana lahatsoratra blaogy andiany faharoa
Lahatsoratra am-blaogy ahitana voanteny 500 ka hatramin’ny 700 no takiana amin’ny mpandray anjara. Hifototra amin’ireto mason-tsivana dimy ireto ny fitsarana ny lahatsoratra : ny mampiavaka azy, ny fahaizana manoratra, ny fipakan’ny lahatsoratra any amin’ny daholobe, ny fanajana ny fitsipi-panoratana sy ny tsipelina malagasy ary ny kalitaony amin’ny maha lahatsoratra am-blaogy azy. Ny Alakamisy 8 Oktobra izao no fara-fandefasana ny lahatsoratra ao amin’ny tenygasy2.0@gmail.com.
Mpitsara matihanina eo amin’ny tontolon’ny teny malagasy sy ny aterineto no hitsara ny lahatsoratra. Tsy iza izany fa i Fanja Razah, mpanoratra, poeta ary mpikaroka momba ny teny ao amin’ny Foibe momba ny teny an’ny Akademia Malagasy, i Jentilisa, mpiblaogy sy mpandika teny ao amin’ny Global Voices Malagasy ary i Eugène Hery, filoha mpanorina ny serasera.org.
Loka maro no hozaraina, ahitana boky malagasy, diary ary loka isan-karazany.
Ny Teny gasy 2.0 sy ny fifaninanana lahatsoratra am-blaogy
Tamin’ny taona 2019, tao anatin’ilay hetsika Teny Gasy 2.0 andiany no nisian’ny fifaninanana andiany voalohany. « Ny fahitanao ny hoavin’ny teny malagasy manoloana ny fanatontoloana sy ny haitao vaovao » no lohahevitra tamin’izany. Roapolo no nandray anjara tamin’izany izay nahitana vehivavy sy lehilahy avy amin’ny faritra samihafa eto Madagasikara. Nisy ihany koa ireo mpandray anjara avy any ivelany.
Ireo mpandray anjara konga nandray ny loka, ireo mpikarakara, ireo mpitsara ary ny solontenan’ny Ministry ny Serasera sy ny Kolontsaina
Navoaka teto amin’ny Blaogin’i Voniary ireo lahatsoratra telo nandresy:
Voalohany: Fanatontoloana sy haitao vaovao – Avotriniaina Stannie
Faharoa : Ny fahitanao ny hoavin’ny teny malagasy manoloana ny fanatontoloana sy ny haitao vaovao – Magie Gam
Fahatelo : Fanatontoloana sy haitao vaovao : manjavozavo ny hoavin’ny teny malagasy – Rindra Rakotonirina
Ny tanjon’ny Teny Gasy 2.0 dia ny fampiroboroboana ny fampiasana ny teny malagasy aty amin’ny aterineto. Singanina manokana ny blaogy satria fitaovana mahery vaika sy mivelatra izy eo amin’ny tontolon’ny aterineto raha oharina amin’ny tambajotran-tserasera isan-karazany. Maro dia maro tokoa ny blaogy soratana malagasy saingy amin’ny teny frantsay ny ankamaroan’izy ireny. Satrinay noho izany, ny hanentana ny besinimaro mba hanokatra blaogy amin’ny teny malagasy. Izany no nahatonga ny Teny Gasy 2.0 nikarakara ny fiofanana “Blaogy Sy Teny Malagasy” tamin’ny volana Febroary 2020 ary izao fifaninanana lahatsoratra am-blaogy andiany faharoa izao.
Mbola maro ireo hetsika hokarakaraina ao anatin’ny io vina fampiroboroboana ny teny malagasy aty amin’ny aterineto io. Fa anio aloha dia manentana anao handray anjara amin’ilay fifaninana lahatsoratra am-blaogy. Tsy voatery hoe manana blaogy na efa mpamokatra lahatsoratra an’aterineto akory ianao fa afaka mandray anjara daholo izay rehetra mahay manoratra sy maneho hevitra amin’ny teny malagasy.
Akorisao ary ny penina… Veleso ny kitendry mantsy azafady e!
blaogy gasy, Blaogy malagasy, blaogysytenymalagasy, fifanianana lahatsoratra am-blaogy, fiofananablaogysytenymalagasy, lahatsoratra am-blaogy, lahatsoratra blaogy, teny gasy, teny gasy 2.0, teny malagasy